Tahotry ny hamoahana ny marina mahakasika ireny hosoka sy hala-bato faobe, nandritra ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo, no hanaovan’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny Prefektoran’ny tanànan’Antananarivo antsojay amin’ireo vahoaka mitaky ny mangarahara sy manohitra ny tsy rariny etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna etsy Analakely (Kianjan’ny 13 Mai).
Omaly mantsy, tsy navela niditra tao amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna indray ireo vahoaka mitolona manohitra ny hosoka sy ny hala-bato nandritra ny fifidianana farany teo. Vao maraina, tany amin’ny 6 ora sy sasany tany dia efa nobahanan’ireo mpitandro filaminana teo amin’ny Parvis. Izany hoe, izy ireo sy ny fiarabeny, ary ireo 4x4-n’ny Emmo no nibahana sy nameno ny kianja tamin’izany. Noho izany, tsy nisy tafiditra tao ireo vahoaka fa tety ivelany avokoa no nanohy ny fihetsiketsehana amin’ny fanoherana ny tsy rariny, amin’ny alalan’ny hosoka sy ny hala-bato. Narantirantin’izy ireo ho hitam-poko, hitam-pirenena ihany koa ny sora-baventy manambara fa “Tsy mendrika ny vahoaka ny fifidianana maloto”, “Izahay tsy manaiky ny halatra sy hosoka”, “Tokony hijoro amin’ny fahamarinana ny HCC, ary tsy tokony hitanila”,…
Rehefa izay, hihamafy ny tolona amin’ny fanoherana ny hosoka sy ny halatra nataon’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, sy ny ekipany miaraka amin’ny CENI. “Na inona na inona antsojay, na toa inona na toa inona ihany koa ny fampiasana ny heri-pamoretana, tsy hihemotra intsony izahay fa dia mitohy ny tolona”, hoy ny avy amin’ny mpomba ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, tamin’ny alalan’ny KMMR sy ny Legal Team.
Ankoatra izay, araka ny efa fantatra, feno mpiasam-panjakana amin’ireo vahoaka etsy amin’ny Kianjan’ny 13 Mai. Na izany aza, mbola ho avy marobe hanatevin-daharana ny tolona manomboka anio, ireo mpiasam-panjakana amin’ireo sehetra rehetra.
Tsy hita ny Préfet
Raha ho an’ny hetsika omaly tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai ihany, nanomboka tamin’ny 9 ora maraina no tonga tsikelikely ny vahoaka. Tsy navela niditra tao amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna izy ireo, ary dia nanatanteraka ny fanentanana hatrany tety ivelan’ny kianja. Ora maromaro taty aoriana, tapaka fa hihazo ny biraon’ny Prefektiora eny Tsimbazaza izy ireo, miaraka amin’ireo mpitarika nahitana ny depiote maromaro, toa an’i Voahangy Raharimanarivo sy Felix Randriamandimbisoa, mba hanontany ilay antony tsy nanomezana alalana ny fampiasana ny Parvis indray, raha toa ka afaka niditra tao ny vahoaka ny alakamisy 3 janoary teo, nanaraka mivantana ilay horonantsary mirakitra ireo hosoka sy halatra tamin’ny fifidianana fihodinana faharoa.
Rehefa tonga teny an-toerana anefa izy ireo, ka niditra tao amin’ny tranoben’ny Prefektioran’Antananarivo ireo solontenan’ny vahoaka mpitolona, akory ny hagagan’izy ireo tamin’izany fa tsy tao amin’ny toeram-piasany ny Préfet. Niezaka niantso ity farany tamin’ny alalan’ny finday ihany izy ireo, saingy tsy nisy varany izany satria tsy namaly antso ity tompon’andraikitra ity.
Noho izany indrindra, nitafa tamin’ny vahoaka ireo mpitarika fa tsy hihemotra intsony ny hetsika fanoherana ny hosoka sy ny hala-bato, fa mitohy ary hihamafy. Ny mpiasam-panjakana rahateo hanatevin-daharana izany manomboka anio eny amin’ny Kianjan’ny 13 Mai.